ပါတီနှင့် ကိုယ်စားလောင်းတွေ လိုက်နာရမယ့် ကျင့်ဝတ် COC အသစ်မှာ ဘာတွေပါလာသလဲ? – Network Media Group
“အခု ဒီ ၂၀၂၀ မှာ အခန်း ၇ ခန်းဖြစ်လာတယ် ပိုပြီး ပြည်စုံလာတာက ကျနော်တို့ မီဒီယာ abuse (အလွဲသုံး) လုပ်တဲ့ ဟာတွေပေါ့နော်။ မီဒီယာ abuse လုပ်တဲ့ဟာ fake news (သတင်းမှား) တွေကို သေသေချာချာ ကျနော်တို့ အဲဒါကို စီမံခန့်ခွဲတဲ့ ကိစ္စတွေ ပါလာတယ်ပေါ့နော် နောက်တစ်ခါ နိုင်ငံရေး ပါတီ အချင်းချင်း စောင့်ကြည့် ညှိနှိုင်း ရေးကော်မတီပေါ့ monitoring committee ပေါ့နော်။ အဲဒီ monitoring committee ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေ ပိုပြီးတော့မှ အားကောင်းလာတယ်။ ပိုပြီးပြည်စုံလာတယ်ပေါ့။ ကျန်တာကတော့ ၂၀၁၅ ကိုပဲ ကျနော်တို့က သေချာပြန် edit လုပ်တယ် ပြန်လိုအပ်တာဖြည့်တယ်။ အဲဒါတွေပါ အဓိကကတော့ အဲဒီ media abuse ကို ကျနော်တို့ သေချာပြင်ဆင်နိုင်တာ တကယ့်ကြီးမားတဲ့ အပြောင်းအလဲပေါ့နော် ဒီ ၂၀၂၀ COC အတွက်” ဒေါက်တာ Mကောန်လ (ကချင်အမျိုးသား ကွန်ဂရက်ပါတီ KNC )
ပါတီႏွင့္ ကိုယ္စားေလာင္းေတြ လိုက္နာရမယ့္ က်င့္ဝတ္ COC အသစ္မွာ ဘာေတြပါလာသလဲ?
“အခု ဒီ ၂၀၂၀ မွာ အခန္း ၇ ခန္းျဖစ္လာတယ္ ပိုၿပီး ျပည္စုံလာတာက က်ေနာ္တို႔ မီဒီယာ abuse (အလြဲသုံး) လုပ္တဲ့ ဟာေတြေပါ့ေနာ္။ မီဒီယာ abuse လုပ္တဲ့ဟာ fake news (သတင္းမွား) ေတြကို ေသေသခ်ာခ်ာ က်ေနာ္တို႔ အဲဒါကို စီမံခန႔္ခြဲတဲ့ ကိစၥေတြ ပါလာတယ္ေပါ့ေနာ္ ေနာက္တစ္ခါ ႏိုင္ငံေရး ပါတီ အခ်င္းခ်င္း ေစာင့္ၾကည့္ ညႇိႏႈိင္း ေရးေကာ္မတီေပါ့ monitoring committee ေပါ့ေနာ္။ အဲဒီ monitoring committee ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ေတြ ပိုၿပီးေတာ့မွ အားေကာင္း လာတယ္။ ပိုၿပီး ျပည္စုံလာ တယ္ေပါ့။ က်န္ တာကေတာ့ ၂၀၁၅ ကိုပဲ က်ေနာ္တို႔က ေသခ်ာျပန္ edit လုပ္တယ္ ျပန္လို အပ္တာျဖည့္တယ္။ အဲဒါ ေတြပါ အဓိကကေတာ့ အဲဒီ media abuse ကို က်ေနာ္တို႔ ေသခ်ာျပင္ ဆင္ႏိုင္ တာ တကယ့္ႀကီးမားတဲ့ အေျပာင္းအလဲေပါ့ေနာ္ ဒီ ၂၀၂၀ COC အတြက္” ေဒါက္တာ Mေကာန္လ (ကခ်င္အမ်ိဳးသား ကြန္ဂရက္ပါတီ KNC )
မီဒီယာ အလွဲသုံးမှု အပါအဝင် ကျင့်ဝတ်များကို နိုင်ငံရေးပါတီများလက်မှတ်ရေးထိုးမည်